« Théâtre contemporain »: hisokatra kokoa ny « Rallye moi(s) Théâtre » 2019 | NewsMada
« Théâtre contemporain »: hisokatra kokoa ny « Rallye moi(s) Théâtre » 2019
Mitondra zava-baovao eo amin’ny tontolon’ny “Théâtre contemporain” sy ny “Rallye moi(s) théâtre” hatrany ny Compagnie Miangaly Théâtre” tarihin’i Christiane Ramanantsoa. Iray amin’ireny ny hisian’ny “improvisation” amin’ity taona ity…
Andiany faharoa ny « Rallye moi(s) Théâtre » 2019 karakarain’ny Compagnie Miangaly Théâtre. Hanomboka ny 8 marsa izao ka tsy hifarana raha tsy ny 28 marsa. Fantatra nandritra ny fanazavana tetsy amin’ny Kudeta Carlton Anosy fa hivelatra kokoa ity andiany ity raha oharina amin’ny teo aloha. Anisany misongadina amin’izany ny fandraisan’anjaran-dry zareo avy any amin’ny Nosy La Réunion amin’ny alalan’ny « Ligue d’improvisation de La Réunion » na ny « Lir ».
Raha ny fantatra, tsy mbola misy manao io « improvisation » io ny eto Madagasikara raha eo amin’ny « théâtre contemporain ». Hanome fiofanana ho an’ireo rehetra liana amin’izany ny « Lir », ny 9 marsa sy ny 10 marsa, ao amin’ny Centre Sesame Ambatoroka sy ao amin’ny Studio 1001 Etoiles Tsimbazaza. Ny 12 marsa sy ny 13 marsa kosa, ho an’ireo mpiofana 10 hanao « coach », hotontosaina ao amin’ny IFM Analakely. Izy ireo indray no hanofana eny amin’ny fonjan’Antanimora, « co-coaching » ao amin’ny zatovolahy. Ny 15 marsa, fampisehoana « improvisation » ataon-dry zareo avy any La Réunion ao amin’ny Studio 1001 Etoile Tsimbazaza. « Matches d’improvisation » hiarahan’ireo mpikambana 5 avy ao amin’ny « Lir » sy ny Cie Miangaly Théâtre » kosa no hotontosaina ao amin’io toerana io ihany, ny 16 marsa.
Tafiditra ao anatin’ny fivelaran’ity andiany faharoa ity ihany koa ny fahamaroan’ny sehatra na ny toerana hanehoana ny seho. « Misy amin’ireo aza tsy azo eritreritra akory hisy fampisehoana teatra izany », hoy i Fela Razafiarison, mpikambana ao anatin’ny Cie Miangaly Théâtre. Ny Ifandraisana bebe kokoa hatrany amin’ny olona sy hampahafantatra azy ireny ny « théâtre contemporain » no anisan’ny tanjona amin’izany, raha ny fanazavny hatrany. Toerana anisany handray ny « Rallye moi(s) yhéâre » 2019ny CGM Analakely, ny Centre Sesame ambatoroka, ny IFM Analekly, ny Lycée FJKM Rainandriamampandry Ankadifotsy, ny « Le maki a bonne mine » Ampasamadinika, ny Akany FJKM Andrainarivo, sns.
Fantatra fa ry zareo avy any Kanada (Quebec) sy Frantsa ary La Réunion no tena havanana sy mampiasa ny « improvisation » ao amin’ny « Théâtre contemporain ».